Raw Compound 7P Powder (1890208-58-8) Vagadziri - Phcoker
Komputa 7p upfu hwakagadzirwa seimwe munhevedzano yemakomponi nechinangwa chekuziva mbiri-inoita thromboxane …… ..
Raw Compound 7P powder (1890208-58-8) tsananguro
Raw Compound 7P powder iyo inokurudzira neurite kuputika kwetsika dzakakura dzemapuroni dzakabva kune hippocampus, cerebral cortex, uye retina. mumuenzaniso wemhuka wekuvhiringidzika kwemagetsi, Raw Compound 7P powder yakaratidzwa kuti ikurudzire kukura kwegapu-43 positive axons, zvichiratidza kuti in vitro neurite inogrowth basa re Raw Compound 7P powder rinoshandurwa mukusimudzirwa kwekugadzirisa axon ku vivo.further optimization of Mvura Yakakura 7P powder uye kujekesa nzira iyo inobatanidza kugadziriswa kweakisi in vivo ichapa nheyo yepamusoro yezvinoitika mune ramangwana kusimbisa nzira dzokurapa.
mbishi 2 - [(2-methoxyphenyl) [(4-methyl phenyl) sulfonyl] amino] -N- (4-methoxy-3-pyridinyl) acetamide (Compound 7P) powder (1890208-58-8) Specifications
Product Name 2 - [(2-methoxyphenyl) [(4-methyl phenyl) sulfonyl] amino] -N- (4-methoxy-3-pyridinyl) acetamide (Raw Compound 7P powder)
Kemikari Name 2 - [(2-methoxyphenyl) [(4-methyl phenyl) sulfonyl] amino] -N- (4-methoxy-3-pyridinyl) acetamide (Raw Komputa 7P upfu)
muchiso Name Raw Compound 7P powder
Molecular Wsere 441.508g
Chinyorera N / A
APane • Kunowedzera kubatana
• Kuvandudza mafungiro
• Inobatsira kurwisa kuneta
• Kudzivirira huniyidheti mukati meuropi
• Anobata uropi hunokanganisa uropi
mbishi Compound 7P powder (1890208-58-8) Tsanangudzo
Raw Compound 7P (2 - [(2-methoxyphenyl) [(4-methyl phenyl) sulfonyl] amino] -N- (4-methoxy-3-pyridinyl) acetamide) poda inosimudzira kubuda kweuriteite yeakakurisa epakutanga mauroni akatorwa kubva muhippocampus , cerebral cortex, uye retina. mune yemhando yemhuka ye optic nerve kukuvara, Raw Komputa 7P poda yakaratidzwa kukurudzira kukura kweapap-43 yakanaka axon, zvichiratidza kuti in vitro neurite kubuda kwebasa reRaw Compound 7P poda inoshandura mukusimudzira kweaxon kumutsidzirwa mu vivo. Raw Compound 7P poda uye kujekeswa kwemaitiro ayo ayo anoita kuti axon kumutsiridzwa mu vivo ichapa hwaro hwaro hwaro hweramangwana kuedza kuyedza nzira dzekurapa.
Kushandiswa kweCompound 7P powder (1890208-58-8)
Compound 7p (2 - [(2-methoxyphenyl) [(4-methyl phenyl) sulfonyl] amino] -N- (4-methoxy-3-pyridinyl) acetamide) yakaratidza basa rakanakisisa rinorwisana nemasero emukenza emumuromo. Mune chipfeve chisina kunaka xenograft model inoculated neHeLa masero, 7p yakaratidza kuti inoderedza kuvharwa kwechirwere chepervical growth. Kuongororwa kwake kwepamusoro-soro kwezvakanyanyisa zvinokonzera tumarara-kutakura tyukuno zvakaratidza kuti 7p yakagadzirisa microstructure nenzira yakatarisira. Chigadzirwa 7p chakawedzerawo kuenzana kweHeLa masero muG0 / G1 uye S-chikamu uye zvakanyanya kuderedza iyo yeG2 / M-chikamu. Migumisiro ye7p paC-caspase-3, C-caspase-9, Bcl-2 uye izwi reBhax muHeLa masero zvakatemwawo.
Tubulin polymerization testay, immunofluorescence studies, cell cell analysis uye kukwikwidza tubulin-binding assay yakaratidza zvakasimba kuti 7p inonzi colchicine inosunga nzvimbo inhibitor ye tubulin.
Benefits of Compound 7P powder (1890208-58-8)
Compound 7p yakasimudzirwazve patsva ye optic yakapwanyika
Gadzirisa zvinokonzera mutsara wemusoro
varumbidzwa Compound 7P powder (1890208-58-8) Dosage
Compound 7p yakaratidza 100% inhibition yeparasitemia pazuva 4 pamitambo yakawanda (100, 50, uye 25 mg / kg) yakapiwa kwemazuva mana akatevera, asi pa 100 mg / kg, mhando dzose dzakapona uye dzakaporeswa, panguva ye50 mg / kg, mapfumbamwe emashanu mutsva akapona uye mapani maviri akaporeswa, uye pa 25 mg / kg, hapana imwe yemashizha yakapona